गाईलाई बचाउन खोज्दा भएको भयानक सडक दुर्घ`ट`नामा सेनाका कर्नेलसहित २ जनाको मृ~त्यु – Eshankharapur
सुशान्तको डायरी भेटिए पछि म’च्चियो स’नस`नी, के लेखिएको छ डायरीमा ? पुरा पढ्नुहोस !
मुख्य पृष्ठ /International News/गाईलाई बचाउन खोज्दा भएको भयानक सडक दुर्घ`ट`नामा सेनाका कर्नेलसहित २ जनाको मृ~त्यु
काठमाडौं । गाईका कारण भएको भयानक सडक दुर्घ`टनामा दुई जनाको `ज्या`न गएको छ । आज भारतको राजस्थान राज्यको बीकानेर जिल्लाको श्रीदङगरगढको राष्ट्रिय राजमार्गमा भारतीय सेनाको एक गाडी पल्टिए पछि सवार दुई जना अधिकारीको मृ~त्यु भएको हो ।
दुर्घटनामा दुई सैनिकहरू घाइ`ते भएका छन् । ती दुई अधिकृतहरू उत्तर प्रदेशको शाहजहांपुर बाट बीकानेर आएर अभ्यासमा सहभागि हुन गइरहेको बताइएको छ । सडकमा अचानक आएको गाईलाई बचाउन खोज्दा दुर्घट`ना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सेरुना थानेका एएसआई शिव कुमारले आज बिहान जोधसर गाउँ नजिकैको सडकमा गाईलाई बचाउने प्रयासमा सेनाका कमाण्डिङ अफि`सरको सफारी गाडी पल्टिएको जानकारी दिए । यस दुर्घटनामा कर्नेल मनीष चौहान र मेजर नीरज शर्मा गम्भीर घाइते भएका थिए । दुबै अधिका`रीहरुलाई गम्भीर अवस्थामा बीकानेरको पीबी`एम अस्पताल लगिएको थियो । जहाँ दुबै अधिकारीहरूको मृ*त्यु भयो ।
घटनामा दुई सिपाही पनि घाइ`ते भएका छन् । सडक दुर्घटनामा दुई सैन्य अधिकारीहरुको मृ~त्यु भएका खबरले त्यस क्षेत्रमा मौनता छाएको बताइएको छ । ठूलो संख्यामा सेनाको गाडी पनि घ`टना स्थलमा पुग्यो । यी अधिकारीहरू उत्तर प्रदेशको शाह जहाँपुरमा तैनाथ थिए । बाँकी जानकारी घाइतेको बयान पछि मात्र उप`लब्ध हुने प्रहरीले जानकारी गराएको छ । जवा`नहरुको नाम खुल्न नसकेको जनाइएको छ ।
हेर्नुहोस्, यस्तो छ नियमित उडानका लागि तोकिएको भाडा (सूचीसहित)